Andian-teny: Quantify, Generate, ary Optimize Copy with AI | Martech Zone
Andian-teny: Quantify, Generate, ary Optimize Copy miaraka amin'i AI
Alakamisy, Jolay 16, 2020 Zoma, Jolay 17, 2020 Douglas Karr
Phrasee mampiasa fiteny noforonina AI hamoahana kopia ho an'ny marika manerantany ary mamorona fiteny vaovao, tsy mbola fahita hatramin'izay amin'ny fotoana tena izy, amin'ny fampiasana ny fitenenana amin'ny fiteny voajanahary sy ny fianarana lalina.
Horonantsary Overview Overview
Phrasee dia teknolojia AI izay mampiasa ny làlan'ny lohahevitra mailakao ho toy ny laboratoara amin'ny fiteny. Ireo singa fiteny dia mitambatra mba hahitana maodely fiteny izay ampifanarahana amin'ny marikao. Avy eo, ny AI dia mampihatra ny maodelim-piteninao tsy manam-paharoa amin'ny fampielezankevitra ara-barotra anao rehetra - manomboka amin'ny mailaka mankany amin'ny push, sosialy aseho, fikarohana karama amin'ny tranokala.
Talohan'ny Phrasee dia tsy maintsy niantehitra tamin'ny fahatsapana olombelona ianao. Ary angamba niasa tamin'ny taona 90 izany. Fa ny mivavaka tsara ny tsinainao dia tsy manapaka azy intsony. Amin'ny ankapobeny, i Phrasee dia manolotra fanokafana miampy 700,000 fanampiny ary 56,000 potsitra fanampiny isaky ny fampielezana.
Topimaso momba ny fanoratana an-tsoratra Powered by Phrasee
Adiresy Phrasee - Fanatsarana ny dika mitovy amin'ny alàlan'ny AI izay ahafahanao misokatra sy tsindry ary hiova fo bebe kokoa. Ny fampidirana dia misy Salesforce, MovableInk, Sailthru, Acoustic, ary Adobe.
Phrasee Push - mampiasa AI hiteraka hafatra manosika anao tsara kokoa noho ny olombelona.
Phrasee Social - mampiasa AI hahazoana hafatra tsara kokoa ho an'ny doka amin'ny Facebook sy Instagram, amin'ny tsindry bokotra iray.
Phrasee Na aiza na aiza - ampiasao AI hanatsarana ny fandikana tranonkala, hanehoana doka, hanaovana fampielezan-kevitra mikarama na zavatra hafa eo anelanelany
Tranga fampiasana lohateny mailaka mandeha amin'ny herin'ny AI
Tamin'ny 2016, eBay dia nandray ny teknolojia AI ary nanakarama Phrasee hampahatanjaka ireo laharan'ny lohahevitra amin'ny mailaka ary avy eo manosika ny fampandrenesana ho an'ireo mpanjifany mailaka mihoatra ny 101 tapitrisa manerantany. Vokatr'izany, Phrasee dia nanova tanteraka ny zava-bitan'ny eBay marketing sy ny fomba firesahany amin'ny mpanjifa an-tserasera. eBay dia nahita:
Fisondrotana salan'isa misokatra 15.8%
Fiakaran'ny tahan'ny tsindry 31.2%
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fiteny sy ny fiteny ny kopian'ny lohateny ao anaty mailaka, ny vokatr'izany dia mampangovitra Fisondrotana 42.3% amin'ny tahan'ny tsindry.
Mametraha Demo Phrasee
Tags: aihiteraka andalana foto-kevitramanatsara ny fandefasana hafatramanatsara ny fampandrenesana fanosehanamanatsara ny doka ara-tsosialymanatsara ny andalana ny lohahevitrakaroka karama aifehezan-tenyfitsapana andalana ny lohahevitraweb copy ai
Lisitry ny fanamarinana: Ahoana ny fomba hamoronana atiny izay misy
Ny birao an-trano nohavaozina ho an'ny firaketana horonantsary sy Podcasting